4.50 ngaphandle kwe 5	ngenxa ye 2 amanqaku umthengi
SKU: 28292-43-5. Udidi: abanye
2-Aminoisoheptane, eyaziwa nangokuthi yi-DMHA okanye i-Octodrine, isisithako esidumile ekusebenzeni kwangaphambili kunye nokushisa kwamafutha ukususela ekuqaleni kwe-2017. Kuyinto ekhuthazayo ekholelwa ukuba kuphuculwe amanqanaba akho omandla.XXUMUMX-Aminoisoheptane isakhiwo esifana ne-DMAA. Ngokwemvelo itholakala ngaphakathi kwinqaba yesiNgesi yaseWaln Tree (AKA. Juglans Regia) ....
I-molecular Formula: C7H17N
I-2-aminoisoheptane (i-Octodrine) ifumana ngokukhawuleza amandla ayo kunye nokuphakamisa amandla. Oku kuye kwathandwa ngokugqithiseleyo njengesongezelelo sokuqala kwangaphambili ekubeni kunemimiselo emininzi eqinisekisa ukuba uphumelele kakhulu ekusebenzeni kwakho: ukukhulisa amanqanaba emandla (okwenza kube lula ukutshintshisa nokunyuka ngaphezulu, oko kuthetha ukuthatha iikhalori ngaphezulu!), Ukunyusa (amandla amaninzi ayithethi nantoni na ukuba ungenayo umnqweno wokusebenza), kunye nomoya ophuculweyo (xa uziva kakuhle ngexesha nangemva kokuzivocavoca kwakho kwenza kube lula ukuba ubuyele kwaye wenze konke kwakhona). Ezinye izibonelelo zibandakanya ukunyamezela okukhulu kwe-5,6, izinga lokunciphisa ukunyanzeliswa kwe-5,6, nokuphucula i-bronchodilation 3b, i-4b, i-5b-efika ngokufanelekileyo xa iphakamisa izisindo, inamandla ngokusebenzisa i-spin okanye i-HIIT kwiklasi, okanye idibanisa abantwana kunye nekhaya elizele mi sebenzi.
I-2-aminoisoheptane (i-Octodrine) inokukunceda ekwandiseni ukulahleka kwesisindo ngenxa yokukwazi ukunciphisa ukutya kunye nokuphucula imvakalelo yakho ngokunyusa ama-hormone enoxanduva lokwenza "uzive kakuhle" 4b, 5b (tshela i-sessions yoxinzelelo ebangelwa uxinzelelo kunye zive uphantsi!) .
I-2-aminoisoheptane (i-Octodrine) yeemeko ezikhuthaza iinzuzo zivela ekubeni zikwazi ukwandisa i-dopamine kunye ne-norepinephrin, ezijongene nokunyuka nokunyuka .3b, 4b, 5b, 6b. Ngokufanayo kwisakhiwo kunye neendlela ezinxulumene ne-classical monoamine neurotransmitters, i-2-aminoisoheptane (i-Octodrine) inokuqalisa ukulandelela i-amine ehambelana ne-1, ngelixa ikhusela okwethutyana ukutshintshwa kwakhona kwe-dopamine kunye ne-norepinephrin kwi-nervinaptic nerve-ukuphucula "i-punch" kunye namandla akhe.
Nazi iziphumo ezichaphazelekayo kunye ne-2-aminoisoheptane:
I-Progesterone Powder (57-83-0)